I-fleet of Ellicott Dredges Hlanza Amalahle Wemalahle, Ucwaningo Lwamacala Ezemvelo
Ukuhlanza kusuka ku-TVA Coal Ash Disaster Break Disound New Ground
Umthombo: I-Engineering News-Record - ENR.com
Ngenkathi uJohn Kammeyer, PE, iphini likamongameli weTennessee Valley Authority lomlilo wamalahle, eqhubekela esikhungweni sikagesi samalahle i-TVA ngo-3: 30 ekuseni ngomhlaka-23 Disemba 2008, futhi “wabona konke okungahambi kahle komgwaqo” - ukucaciswa , U-5.4 million cu yd womlotha wamalahle ovela echibini lomlotha walesi sitshalo - uKammeyer wazi ngaso leso sikhathi ukuthi kube nokwehluleka kobunjiniyela.
“Ngangingakaze ngiyibone into enjengaleyo phambilini,” usho ngomlotha wamalahle omanzi owathulula udayi owehlulekile izolo ebusuku, wagcwalisa uMfula i-Emory namachibi aseduze, wahlanganisa imigwaqo nojantshi, wonakalisa umhlaba ongamahektare angama-300 tshala ngensalela yomlotha.
Eminyakeni emibili nohhafu kamuva, le ndawo ibingakabuyiselwa ngokuphelele kulokho ochwepheshe abakubize ngokuthi inhlekelele yezemvelo embi kunazo zonke ngohlobo lwayo. Kepha abasebenzi bakwazile ukukhipha wonke umlotha obucayi - cishe u-3.5 million cu yd - ovela e-Emory, osekuvulwe kabusha eduze nendawo yokuchitheka komlotha. I-TVA manje isigxile kulokho ekubiza ngokuthi “okungabalulekile” ukususwa komlotha emhlabeni. Ukuhlanzwa kokuchitheka, okulinganiselwa ku- $ 1 billion kuya ku- $ 1.2 billion, kulindeleke ukuthi kuqedwe ngo-2014.
"Sibona ukuphela sekusele kancane," kusho uBob Deacy, iphini likamongameli omkhulu weTVA ophethe ukuhlanzwa eKingston. Ukuhlolwa kwekhwalithi yomoya namanzi akukhombisanga zinkinga ezinkulu zesikhathi eside ngezinsimbi ezisindayo noma okunye ukungcola, yize ukuhlolwa kuyaqhubeka. ISwallows ibonakala ibuya njalo osebeni lomfula; abasebenzi bakule ndawo bathi ukudoba akukaze kube ngcono.
Kepha ukuhlanzeka kuyingxenye kuphela yendaba.
I-TVA isebenzisa imali efinyelela ku- $ 2 billion ukusimamisa nokufaka isitoreji esimanzi kuzo zonke izitshalo zayo nokuguqula umlotha wayo wamalahle ube isitoreji esomile, uhlelo oluhle kakhulu olubandakanya ukwakhiwa kodonga lwama-80-ft-deep slurry oluzungeze ichibi lomlotha wamalahle laseKingston ukuvikela ukwehluleka kwesikhathi esizayo. Ngaphambi kuka-2008, amachibi omlotha wamalahle weTVA ayenganakekelwa kahle, futhi abaphathi babevame ukungazinaki amafulegi abomvu ngamachibi, ngokusho kombiko we-2009 TVA.
Ngokuya ngomphumela wemithetho elindile ye-Environmental Protection Agency engabeka ukulahlwa komlotha wamalahle ngaphansi kweso elibukhali, imizamo ye-TVA ingafanekisela lokho leyo mithetho emisha engadinga ezinye izinsiza ezinezitshalo zamalahle. Njengamanje, cishe izitshalo eziyi-100 zase-US zinezinto ezingaba ngu-676 ezimanzi ezimanzi ezinsalela yamalahle-umlotha, kusho i-EPA.
Kodwa-ke, izinguquko kwezinye izinsiza ngeke zenziwe ngaphambi kokuthi kukhishwe umthetho we-EPA noma iCongress iphasise umthetho osalindile wamalahle.
"Ngokunikezwe lokho okusengcupheni kanye nenani lemali, izinsiza azifuni ukuhlawuliswa ngokwenza izinguquko ezingasekelwa yimithetho ye-EPA," kusho uJim Roewer, umqondisi omkhulu, i-Utility Solid Waste Activities Group, eholwa umkhakha kagesi iqembu.
Imikhumbi yakwaSevenson Environmental Services ' Ellicott® uphawu lomkhiqizo isetshenziswa ekuhlanzeni.